China ukukhiya up lotion futha Ukwakha futhi Factory | Iphayona
Ipompo elide le-Nozzel
I-Card Spray ne-Pen Spray
Okuqhubekayo Futha Bottle
inhlamvu encane 2
Ama-caps amabili aqala isifutho
Idamu lokuhambisa umlomo wombhobho omude
khiya ipompo lotion
Lolu chungechunge luvaliwe lotion futha dispenser, isilinganiso sokukhishwa ngu-1.80 + -0.20ML / T, sasetshenziselwa i-shampoo, i-lotion yomzimba, ukunakekelwa kwezinwele, uketshezi lokuwasha izitsha, i-wash wash nokunye.
Ukuvalwa okuningi kuyatholakala ukufanisa amabhodlela akho umehluko (24/410, 24/415, 28/410, 28/415) .Imibala ikhethwa nguwe eceleni bushelelezi, ubambo, ubuciko obufana nogesi, i-aluminium chrome, ukuphrinta usilika kanye nefoyili igolide liyatholakala.
Kunezitayela ezi-3 zalokhu ehambisa futha, ukuvalwa bushelelezi, ukuvalwa nge-ribbed nokuvalwa kwe-aluminium. Futhi kungakhiqiza amaphampu e-foam ezinhlobonhlobo zemibala ehlukene
Lokhu lotion futha dispenser une-screw down lock system, futhi unama-actuator amaningi ongakhetha kuwo.
Ubuningi be-oda lethu elincane ngama-PC ayi-10,000, kepha futhi siyamukela uma ufuna ukwenza i-oda lokuhlola ukwazi ikhwalithi nensizakalo yakho.
I-1.The Best design yokuqala ihlangabezana nezidingo zakho ezahlukahlukene.
2. Iphethini nesitayela esihlukile sikunikeza ubuntu obenele.
3. Uhlelo oluqinile lokulawula ukukhiqiza luqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo wethu.
4. Njengomkhiqizi, siyakwazi ukukunikeza intengo yokuncintisana kakhulu nensizakalo enhle.
5.40 imikhiqizo yomkhiqizo,ezingaphezu kuka-10 imikhiqizo imigqa, iDemo ukukhiqizwa phambili isikhathi.
Umkhiqizo we-6.Each uhlolwe ngumshini futhi unokubhekwa okuqinile kwekhwalithi ngabasebenzi ngaphambi kokuthunyelwa.
7.we babe ifektri isikhunta abaneminyaka engaphezu kwengu-15 nesipiliyoni, ngakho-ke singenza isikhunta ezintsha ukuze babe ingqikithi ezahlukene design entsha ukuhlangabezana nanoma imuphi imfuneko.
Ekuthengeni amaphampu we-lotion, kufanele uthathe okokusebenza, usayizi wentamo, ubude be-tube, isilinganiso sepompo, umbala, lapho ucatshangelwa. Uma unesifiso sokwazi okwengeziwe ngomugqa womkhiqizo we-ALL STAR PLAST (P.PIONEER), zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi.
Langaphambilini ipompo lotion engakwesokunxele
Olandelayo: isifutho senkungu
I-24mm Lotion Pump
28mm Ipompo Elimnyama Lotion
Iphampu engu-28mm yeLotion
Iphampu ye-Bamboo Lotion
Ipompo Elimnyama Elimnyama
Igolide Lotion Pump
Hand Lotion Pump Idivaysi ekhipha
I-Lotion Pump Cap
Lotion Pump Idivaysi ekhipha
Amaphampu eLotion Ayathengiswa
Ipompo Lotion Leplastiki
ipompo lotion engakwesokunxele
ipompo-yokukhiya ipompo lotion
No.7 Fangzhong Road, Yuyao idolobha, Ningbo, Zhejiang, China
Isandla Sokuklama Nokukhiqiza ...
Icase Study yeTrigger Sprayer
I-Larg est nobuhle obuholayo ...